Ikhaya » izithuba » Iindaba zoKhenketho » Oko kufunwa lihlabathi ngoku: IBhodi yoKhenketho yeNtsebenziswano eShanghai
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeChina zokuHamba • Iindaba zaseKazakhstan zokuhamba • Iindaba zaseKyrgyzstan zokuhamba • Iindaba zokuhamba ePakistan • Russia iindaba zokuhamba • Iindaba zokuhamba eTajikistan • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseUzbekistan zokuhamba
Oko kufunwa lihlabathi ngoku: IBhodi yoKhenketho yeNtsebenziswano eShanghai
by UAgha Iqrar
Ibhalwe ngu UAgha Iqrar
Inkulumbuso Phakistan U-Imran Khan ngexa ebethetha kwiNgqungquthela yoMbutho weNtsebenziswano yase-Shanghai (i-SCO) e-Bishkek uqaqambise isidingo sesicwangciso esiliqili sokuphuhlisa ukhenketho kumazwe angamalungu e-SCO, Iarhente yeendaba ye-DND ixelwe. Umbono wakhe uxhasa umnqweno ekudala ulindelwe wabachaphazelekayo kwezokhenketho kuMbindi weAsia kunye noMbutho wezoKhenketho weZizwe eziManyeneyo (UNWTO). Ukusekwa kweBhodi yoKhenketho ye-SCO inokuba linyathelo lokuqala ekufezekiseni iithagethi zeshishini lezokhenketho ngokudibeneyo.
I-SCO ngumbutho woorhulumente owenziwe yi-China, i-Russia, i-Kazakhstan, i-Kyrgyzstan, i-Tajikistan, ne-Uzbekistan kunye ne-wad esekwe e-Shanghai ngo-2001. ukwanda kokusebenzisana kwezomkhosi kunye nobunqolobi kunye nokwabelana ngobuntlola. I-SCO ikwaqinise ukugxila kwayo kumanyathelo oqoqosho lwengingqi njengodibaniso olusandula ukubhengezwa lwe-Silk Road Economic Belt ekhokelwa e-China kunye ne-EU ekhokelwa yi-Eurasian Union.
I-Pakistan kunye ne-India ziintshaba ezimbini phakathi kwamazwe angamalungu e-SCO, ke ngoko, ukucinga ngesicwangciso se-visa esidibeneyo phakathi kweqela eliphikisanayo liphupha nje kodwa kunokucingelwa ngokwenziwa kwe-SCOTB (iBhodi yoKhenketho ye-SCO) enokuthi inike ithuba kuwo omabini la mazwe Ukuqonda izibonelelo zoxolo ngokhenketho.
Ukushiya iPakistan neIndiya bucala, amanye amazwe e-SCO angaya phambili ngesicwangciso sobumbano sokukhuthaza ukhenketho kumazwe angamalungu e-SCO, kwaye kunokwenzeka ukuba iPakistan neIndiya kwixa elizayo baziqonde izibonelelo zesicwangciso sobumbano sokhenketho.
Kukholelwa ukuba kwinqanaba lokuqala, iiRiphabliki zase-Asia eseMbindini, abo bangamalungu e-SCO (Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan) kunye neRussia ne China bangaqhubela phambili phantsi kombono we-Nkulumbuso yase-Pakistan u-Imran Khan kukhenketho oludibeneyo qhinga.
Amazwe akuMbindi weAsia yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwezokhenketho kwihlabathi, kwaye badlale kakuhle kwindawo yezokhenketho kule minyaka ingama-2 idlulileyo emva kokuzimela geqe kwelalisakuba yiSoviet Russia.
La mazwe anakho konke ukunikela kubandakanya ukhenketho lwezendalo, ubuhle bendalo, ukubuk 'iindwendwe kunye nabantu abanobuhlobo, kunye neenkonzo ezilungileyo kunye neziseko zophuhliso. Umqobo ophambili kuphuhliso lokhenketho kulo mmandla kukungabikho konxibelelwano olomeleleyo phakathi kwabasemagunyeni kwezokhenketho kuwo onke la mazwe kunye nolawulo olunobubele bevisa.
Abakhenkethi bamazwe aphesheya bajamelana neengxaki ezinzima xa benqwenela ukuwela umda ukusuka kwiRiphabliki yase-Asia esembindini ukuya kwelinye ilizwe lase-Asia (umzekelo ukusuka eTajikistan ukuya eUzbekistan okanye eKyrgyzstan). ukhenketho kwaye wandise ingeniso yalo yokhenketho. Oku kunokwenzeka ukuba kukho unxibelelwano olomeleleyo phakathi kwabaphathiswa bezokhenketho kuwo onke la mazwe. Kukho imfuneko yesiCwangciso-qhinga esiHlanganisiweyo soKhenketho, esiboniswe yi-Nkulumbuso yase-Pakistan u-Imran Khan, emva koko i-SCO iya phambili ukuya kwiBhodi yoKhenketho ye-SCO enabasemagunyeni kwezokhenketho kuwo onke amazwe angamalungu e-SCO. Ibhodi enjalo iyakudlala indima entle kubudlelwane obunobuhlobo kuwo onke la mazwe kwixesha elizayo.
Ezokhenketho sesona sixhobo sisebenzayo sokungenisa imali kunye nokuseka uxolo olunokufikelelwa. Ezokhenketho kufuneka ziqwalaselwe kungekuphela njengomboneleli wengeniso kodwa umanyano kunye nomvelisi woxolo.
Ingxaki yentengiso yezokhenketho yase Mzantsi Asia bubudlelwane obubi e-Indo-Pakistan kunye nezinto eziphambili zoorhulumente ezichasene neemfuno kunye nomzi mveliso wezokhenketho.
EMazantsi e-Asiya, oorhulumente basePakistan, eIndiya, eSri Lanka, eNepal naseAfghanistan baneengxabano ezahlukileyo kwezopolitiko nakwezopolitiko, kwaye esi sesona sizathu siphambili sokuba uMbutho waseMzantsi Asia weNtsebenziswano yeNgingqi (SAARC) usilele ukuseka unxibelelwano kunye nothungelwano olomeleleyo kwicandelo lezokhenketho, kuba i-SAARC ayikhange isete nayiphi na ibhodi yezokhenketho ukujongana nalo mbandela.
Isicwangciso se-UNWTO Silk Road sinokufezekiswa kuphela xa amazwe angamalungu e-SCO kwinqanaba likarhulumente, nakwinqanaba labadlali abangekho kurhulumente kunye nabathathi-nxaxheba, bedibanisa izandla kwinjongo enye yokuphucula isiseko sokhenketho kulo mmandla.